အခမဲ့ဆဲလ်ဝန်ဆောင်မှု | USAHello | USAHello
သငျသညျကို USA မှအသစ်သို့ Are? အခမဲ့ဆဲလ်ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့သင်တို့အလိုတခုတည်း? USAHello နှင့်က Ultra မိုဘိုင်းသင်တဦးတည်းတစ်လအခမဲ့ဆဲလ်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
သငျသညျအခမဲ့ဆဲလ်ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူတစ်ဦးကဒုက္ခသည်သို့မဟုတ်လူဝင်မှုရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ. ခေါ်တော်မူတစ်ဦးကမိုဘိုင်းကွန်ရက်ကုမ္ပဏီ ultra မိုဘိုင်း သင်၏ဖုန်းများအတွက်သင်တစ်ဦးအခမဲ့ SIM ကဒ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်. ဒီ SIM ကဒ်နှင့်အတူ, သငျသညျအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်လသင်၏ဖုန်းအဘို့အရလိမ့်မယ်. ပြီးတော့ Ultramobile ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကို USA ၌မိမိတို့အသက်တာသစ်တစ်ဦးအပြုသဘောအကူးအပြောင်းများကူညီပေးလို.
ဤသည်အခမဲ့ SIM ကဒ်ပါဝငျမညျ:
Unlimited ဆွေးနွေးချက်ကို USA အတွက်စာသားမ
5 4G LTE ကိုဒေတာများ၏ gigabytes
မှ Unlimited ဟောပြောပွဲ 80 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများ
သငျသညျစိတ်ဝင်စားလျှင်, ကျေးဇူးပြု ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့. ကျနော်တို့သင်ကတ်တစ်ကတ်မှာသုံးနိုငျတဲ့ link ကိုစလှေတျမညျ. သင်သည်သင်၏အမည်ကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, လိပ်စာ, နှင့်အီးမေးလ်နှင့်တစ်ကဒ်သငျ့အိမျမှတင်ပို့ပါလိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. လူတစ်ဦးနှုန်းတစ်ဦးတည်းသာကဒ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
ဝန်ဆောင်မှုရရှိရန်, သင်သည်သင်၏ SIM ကဒ်ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် တစ်ဦးကို unlocked ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်း. သင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ကနေတဆင့်ကိုသက်ဝင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအငျတာနကျကျော်သို့မဟုတ်က Ultra မိုဘိုင်းဖောက်သည်ထောက်ခံမှုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဖုန်းကိုသက်ဝင်စေနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့သည့်အခါ, ငါတို့သည်သင်တို့အသစ်ရဲ့ကဒ်ကို set up ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်. သင်ကလက်ခံရရှိသည့်အခါညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းကဒ်နှင့်အတူထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်.
USAHello က Ultra Mobile နဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါကြောင့်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကို၏က Ultra မိုဘိုင်းကနေမဆိုပိုက်ဆံမခံမယူ.